छेउछाउका खजानाको लोकतन्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
आश्विन ३०, २०७६ चन्द्रकिशोर
एउटा कविताको शीर्षक छ, ‘बालकहरूको चित्रकला प्रतियोगिता ।’ त्यसमा बच्चाहरूले अनेकौं चित्र कोरेका छन् । नीलो आकाश, सूर्य, चन्द्रमा र ताराहरू बनाएका छन् । पहाड, नदी, झरना, मकान, सडक, पुल, बस, स्कुटर र कारहरू बनाएका छन् । साइकल चलाउँदै गरेको र पैदल हिँड्दै गरेका मानिसहरू पनि बनाएका छन् ।
कवि लेख्छन्, ‘चित्र बनाउने उत्साहमा यति धेरै चित्रहरू कोरिँदै गयो कि एउटा भकुन्डो राख्ने ठाउँ पनि खाली राखिएन ।’ आखिर बच्चाहरूले सम्झे ठूलाबडाहरूले यस दुनियाँ बनाउन के कस्ता गल्ती गर्दै गएका छन् । हुन पनि यही भएको छ, धर्तीमा । कवितामा बच्चाहरूले आफ्नो चित्रमा प्रकारान्तरले त्यही सब चित्रित कोरेका छन्, जो हामीले यस धर्तीमा गरेका छौं । हामीले गाउँ–सहर चारैतिर कंक्रिटको जंगल निर्माण गरेका छौं । हिन्दी कवि राजेश जोशीको यस कविताले विकासको नाममा पृथ्वीमा भएको विनाश र यसले बाल मस्तिष्कमा विरासतमा प्राप्त बुझाइबारे बडो सवेदनशील तरिकाले चित्रित गरेका छन् । बच्चाहरूले त्यही कुरा बुझ्छन्, जो तिनले छेउछाउमा देख्छन् ।
एउटा अङ्ग्रेजी आहान छ, ‘एज डेड ऐज डोडो’ अर्थात् यसरी मर्‍यो, जसरी डोडो । लुई क्यारलको किताब ‘एलिसेज एडभेन्चर्स इन वन्डरल्यान्ड’मा डोडोको चर्चा पाइन्छ । डोडो कसरी लुप्त हुँदै गयो, त्यसको वर्णन यसमा छ । त्यसैले यहाँ प्रयोग भएको यो आहान फगत आहान होइन, यसभित्र प्राणीहरूको विलुप्तिको भयावहबारे प्रस्ट पार्ने प्रयास भएको छ । भनिन्छ, डोडो चरा र डोडो रुखबीच गजबको साइनो थियो । सन् १६८० मा डोडो चरा पूर्णरूपमा लोप भएपछि मरिससमा एउटा पनि नयाँ डोडो रुख उम्रिएको छैन । अत्यधिक सिकारका कारण पृथ्वीबाट डोडोको वंश नै समाप्त भयो र आहान नै बन्यो, ‘डेड ऐज डोडो ।’ डोडो चरा र रुख मरिससका स्थानीय जीव थिए, जो दुनियाँमा अन्यत्र पाइँदैनथ्यो । डोडो चराले यस प्रकारको रुखको बीउ अंकुरनमा सघाउ पुर्‍याउँथ्यो । न रह्यो डोडो चरा न उम्रियो नयाँ डोडो रुख ।
जीवहरूको संरक्षण हाम्रै लाभका जरुरी छ । यिनीहरूबीच एकअर्कासँग गाँसिएको भविष्य छ । एकको अस्तित्व संटमा पर्दा अर्को मौलाउन सक्दैन । भनिन्छ, कुनै बखत हवाइद्वीपमा हाउकुवा हिवी नामको फूलैफूलका रुखहरू प्रशस्त पाइन्थ्यो । यसलाई सन् १९९२ मा लुप्त घोषित गरियो । किन यस्तो भयो त ? खोजबिन गरेपछि थाहा भयो, हनिफिसर चरा यसको ठीक उसै प्रकारले सेवा गर्दोरहेछ, जसरी मौरी र पुतलीहरूले अन्य पुष्पीय रुखहरूलाई अर्थात् परागसेचनमा सहायता गर्छन् । यसले हनिफिसरलाई मह प्राप्त हुन्थ्यो । जैविक विविधता प्रकृतिको अनमोल निधि हो । जैविक विविधताको आशय पृथ्वीमा पाइने समस्त जन्तु, रुख–बिरुवा, सूक्ष्म प्रजातिहरूसँग जोडिएको छ । प्राकृतिक सफाइकर्मी गिद्धहरूको सङ्ख्यामा अचानक कमी हुनथालेपछि यसलाई पनि ‘डेड ऐज डोडो’ मान्न थालिएको छ ।
तर्क गर्नेहरू भन्छन्– विलुप्तीकरण हुनु एउटा प्राकृतिक परिघटना हो । के भयो त ? यसैकारण धर्तीमा अस्तित्वमा रहेका हजारौं जीव आज हामीमाझ छैनन् । अहिलेको विलुप्तीकरण प्राकृतिक कारणले भइराखेको होइन । त्यसैले यो चिन्ताको विषय हो । पछिल्ला केही दशकभित्र जसरी तीव्र गतिमा विलुप्तीकरण बढेको छ, त्यो डरलाग्दो छ । यसकारण पनि छेउछाउमा रहेका अनमोल खजानाका रूपमा रहेका चराचुरुङ्गी, रुखबिरुवा, पशु, किराफट्याङ्ग्राहरूबारे परिचय हुनु जरुरी छ । भोलि यसको खाँचो पर्दा ‘हामीलाई त यसबारे थाहै थिएन’ नभनियोस् । विकास वा आयआर्जनको चपेटामा आर्थिक रूपले लाभ लिने वा सुन्दर जीवजन्तुसमेत परेका छैनन् । संरक्षण तिनलाई पनि चाहिएको छ, जसले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुर्‍याउँछन् भन्ने छैन । उदाहरणका लागि सर्प र भ्यागुतो, किराफट्याङ्ग्रा यी सबै धर्तीमा जीवनको पहिया गतिमान राख्न आवश्यक छ । यदि व्याक्टेरिया अन्त्य भयो भने हामी सबैको विनाश हुन्छ । मौरी लोप भयो भने त्यसको सोझो अर्थ मानिसको अन्त्य पनि निकट छ । यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रजाति हो, जसको प्रकृतिमाथि प्रभाव त्यसको आकार र सङ्ख्याको तुलनामा बढी बताइन्छ । प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका छन्, ‘यदि मौरीहरू लुप्त भए भने मानिसको लागि यस धर्तीमा केवल चार वर्षको जीवन शेष रहनेछ ।’ मौरी नहुँदो हो त फूलमा परागसेचन हुँदैनथ्यो, नयाँ–नयाँ रुखबिरुवाहरू उम्रिँदैनथे र कुनै पनि जनावरको अस्तित्व रहँदैनथ्यो । अन्त्यमा, कुनै पनि मान्छे बाँच्दैनथे । नयाँ अध्ययनहरूले भन्छ, ‘मौरीको सङ्ख्यामा निकै कमी आइरहेको छ । जैविक विविधता धर्तीमा सुचारु जीवनको एकमात्र सूत्र हो । सबै कुरा एकआपसमा जोडिएको छ । अलग–अलग कसैको अस्तित्व छैन । यस महत्त्वपूर्ण शृङखलामा कुनै एउटाको अस्तित्व ढुलमुल भयो भने अर्कोलाई असर पर्छ ।
हामी अहिले जैविक विविधता मासेर आफूमात्र बाँच्ने प्रयास गर्दैछौं । मान्छेको प्रजातिमात्र होस् भनेजस्तो हाम्रा गतिविधि देखिन्छन् । यो अवस्था कति भयावह र डरलाग्दो होला ? कल्पना पनि गर्न सकिन्न । हामी विस्तारै यस्तै खाले अँध्यारो सुरुङभित्रको जीवनयात्रामा छौं । हाम्रै छेउछाउमा खाली जग्गा हुन्थ्यो । अनेकौं प्रकारका रुखहरू थिए । रंगीबिरंगी चराहरू बिहान–बेलुका घर–आँगन हाजिरी हुन्थे । ती सबै मासिँदै, हराउँदै, लोप हुँदै गएका छन् । कस्तो स्थिति भयो भने अनेकन पशुपन्छी र रुखहरूसँग जोडिएका लोककथा र लोकगीत सुनाउनेहरू अब देहातमा समेत विरलै छन् । जलवायु संकट आयो । केही दशक पहिलासम्म हाम्रा वरिपरि जति प्रकारका रुख र चराहरू थिए र तिनप्रति हाम्रो सरोकार थियो, त्यो हाम्रो पारिवारिक विस्तारकै विविध रूपान्तरण थियो । यो कुटुम्बभाव नै हामीलाई चर–अचर, जड–चेतन जगतका साथ कर्तव्यशील बनाउने माध्यम थियो । सांस्कृतिक अनुष्ठानले यिनीहरूप्रति कृतज्ञताको भाव प्रकट गर्ने मौका दिन्थ्यो ।
विजयादसमीको दिन कतिपय ठाउँमा नीलकण्ठ चराको दर्शन गर्ने परम्परा छ । पर्साको बिरञ्चीबर्वामा त नीलकण्ठ यात्रा नै निकालिन्छ । यस लोकमान्यताका पछाडि जीवजगतप्रति प्रेमको भावना निहित छ । अहिलेको समयमा सांस्कृतिक अनुष्ठानमा श्रद्धा कम हुँदै गएको छ उत्सवधर्मिता बढ्दै गएको छ । अब पूजाले फगत एउटा आयोजनको रूप लिएको छ । यसको सार नै प्रकृतिलाई पनि मानिसको छिमेकीकै रूपमा हेर्ने र आदरभाव राख्ने हो । मान्छे र प्रकृति बीचको सम्बन्धको यो शास्त्र कुनै राजामहाराजाले निर्माण गरेका थिएनन् । कुनै ठूलाबडाले चलाएको भए शिलालेखमा लेखिन्थ्यो । यो त जीवनचर्याको अभिन्न हिस्सा थियो । ऋतु अनुसार चराहरूको दर्शन र रुखहरूको पूजन गरिने चलन छ, तर अब यस्ता कुराको महत्त्व हराउँदै गएको छ । समाजमा प्रकृतिसँग जोडिने अद्भुत ज्ञान बाँचेको छ, तर त्यो छरप्रस्टिएको छ । यसलाई सँगाल्न पर्याप्त धैर्य र संवेदनशीलता आवश्यक छ । अझै पनि प्रकृति र मानिस बीचको पारम्परिक ज्ञानलाई जोगाउन सकिन्छ । अब पनि चेतेनौं भने न्याउरी मारी पछुतो हुनेछ ।
अहिलेको पुस्ता निकै हतारमा हुर्किंदैछ । ऊ तात्कालिक लाभहानिको कुरा सोच्छ । त्यही रुख लगाइन्छ, जसले उसलाई तत्काल फाइदा दिन्छ । त्यही चरा वा पशु पालिन्छ, जुन तत्काल आयआर्जनको बलियो स्रोत बन्छ । घरपालुवा मात्रले कुनै नश्ललाई जोगाउन सक्दैन । हेर्दाहेर्दै हाम्रै वरिपरिका रैथाने पशु नश्लहरू लोप हुँदै गएका छन् । जंगल मासेर हरण हुने जैविक विविधताको आपूर्ति पुनर्उत्पादित वनले दिन सक्दैन । जंगल आफैंमा प्रदूषण, भूक्षय, भूस्खलन, जैविक विविधता संरक्षणको आधार हो । पानी भण्डारण र रिचार्जका लागि वरदान नै हो ।
यस सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रकृतिसंगको सामञ्जस्यता नै हो । जब–जब मानिसले प्रकृतिसँग छेडछाड गरेको छ, प्रकृतिले पनि त्यसको बदला लिन विनाशलीला मच्चाएको छ । हडप्पा र मोहनजोदाडोको उन्नत सभ्यताको नाश अत्यधिक वन कटाइ र प्रकृतिसँग अत्यधिक छेडछाडको परिणाम थियो । अहिले विकासबारे जुन बुझाइ छ, त्यसले सुदूर देहातमा पनि जताततै कंक्रिटीकरण गर्दैछ । पुराना रुखहरू ढालिँदैछन् । रैथाने र आयातित चराहरू घुमफिर गर्ने सहज परिवेश मासिँदैछ । ऐतरेयोपनिषद्मा शान्ति पाठका लागि प्रार्थना गरिएको छ, ‘मेवाक्मनसि प्रतिष्ठिता मेमन: वाचि प्रतिष्ठितम् ।’ अर्थात् मेरो वाणी मनमा स्थिर होस् र मन वाणीमा स्थित होस् । यो प्रार्थना सरल लाग्छ, तर पनि यसले गहकिलो कुरा उठाएको छ । सङ्कल्पसाथ वचन पनि एक होओस् । आफ्नो छेउछाउ र परिवेशका जीवजन्तु, वनस्पति लगायत प्रकृतिको बाँच्न पाउने लोकतन्त्रलाई जोगाउन सकियो भनेमात्र राष्ट्रिय सुरक्षा हुन्छ ।
प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ ०७:५९
आश्विन ३०, २०७६ मल्ल के. सुन्दर
नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला सन् १९६० मार्च १८ का दिन चीनको औपचारिक भ्रमणमा थिए । त्यस दिन अध्यक्ष माओसंँग विशेषत: नेपाल–चीनबीच सगरमाथाको शिखरमाथिको सार्वभौमिकताबारे एक प्रकारको किचलो निस्केको थियो, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले त्यसै प्रसङ्ग कोट्याउँदा अध्यक्ष माओले समाधानको रूपमा प्रस्ताव गरेका थिए— त्यो कुनै समस्याको विषय होइन, मानिस बसोबास नगर्ने त्यो निर्जन ठाउँ हो, सहज समाधानका लागि मेरो प्रस्ताव हो, चीनतर्फको उत्तरी मोहडाबाट शिखर चढ्न लागेकोबारे हामी तपाईंलाई जानकारी गराउँछौं, त्यस्तै नेपालको दक्षिणी मोहडाबाट शिखर उक्लन लाग्दा त्यसबारे हामीलाई तपाईंले जानकारी गराउनुस् । एभरेष्ट पश्चिमाहरूले अविष्कार गरेको नाम हो, हामी यसलाई नयाँ नाम दिऔं, दुई देशको मित्रताको प्रतीक ‘चीन–नेपाल मैत्रीशिखर’ ।
अध्यक्ष माओको प्रस्ताव अनुसार सगरमाथा वा एभरेष्टलाई ‘चीन–नेपाल मैत्रीशिखर’का रूपमा स्थापित गर्ने काम त भएन, तर भरखरै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सम्पन्न गरेको नेपालको राजकीय भ्रमणले नेपाल र चीन बीचको दौत्य सम्बन्धलाई सगरमाथाको उचाइ जतिकै मित्रताको शिखरमा पुर्‍याएको छ । यद्यपि दुई देशीय सम्बन्ध तथा आपसी सहयोगलाई भौतिक तथा मौद्रिक इकाइका आधारमा कति सफल/असफल भनेर आँकलन गर्ने मानसिकताबाट हामी मुक्त भएको भने पाइएन । अधिकांश अर्थविद्, योजनाकार, कूटनीतिक विज्ञ भनिएकाहरूले राष्ट्रपति सीको भ्रमणको उपलब्धिलाई शुभलाभको बुझाइले व्याख्या गरिरहेका छन् । भए–गरेका सबै सहमति अनि सम्झौताहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक आर्थिक भार अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएका आधारमै यस भ्रमणलाई उपलब्धिपूर्ण ठहर गरेका छन् ।
नेपाली राजनीतिकवृत्तमा चीनप्रतिको बुझाइमा लामो समयदेखि रहँंदै आएको एक प्रकारको उदात्तता र सकारात्मकताले पनि चीनले नेपाललाई ‘राम्रै गरे, वेश गरे’ भन्ने चलन छ । सन् १९५५ अगष्टमा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएपश्चात चिनियाँ सरकारको सहयोगमा बनेका अरनिको राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, चक्रपथ, सुनकोशी जलविद्युत परियोजना अनि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, हरिसिद्धि इँटा–टायल कारकाखाना, भृकुटी कागज कारखाना, वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, सीभिल हस्पिटलजस्ता थुप्रै आधारभूत संरचनाहरूलाई असल छिमेकीको तर्फबाट प्राप्त सहयोगको दृष्टान्तका रूपमा उल्लेख गरिन्छ । त्यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत परियोजनादेखि भूकम्पद्वारा क्षतिग्रस्त नौतल्ले दरबार, दरबार हाइस्कुल लगायत दुई दर्जनभन्दा बढी भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका कुरा पनि चिनियाँ सहयोगको सिलसिलामा चर्चा गरिन्छ । त्यस अतिरिक्त अन्य आर्थिक–भौतिक सहयोग तथा जनशक्ति विकासका लागि उपलब्ध गराइएका थुप्रै अवसर पनि छन् ।
यिनै आधारमा राजनीतिक नेतृत्व तहदेखि नेपाली कूटनीतिज्ञहरू र निजामती क्षेत्रले नेपालको समृद्धि र विकासका लागि यसरी आर्थिक, भौतिक सहयोग जुटाइदिएकोमा मुक्तकण्ठले चीनको प्रशंसा गरेको पाउँछौं । यद्यपि यी सहयोग नेपाल–चीन द्विपक्षीय दौत्य सम्बन्धका अन्तरङ्ग कुरा हुन्, कुनै अनुग्रहका रूपमा प्राप्त होइनन् । यस अतिरिक्त द्विपक्षीय सहयोग सम्बन्धमा चर्चा गरिँंदा चिनियाँ सहयोगबारे मात्र विहङ्गम उल्लेख गर्ने शैली नेपाली समाजमा छ । त्यसैको निरन्तरता राष्ट्रपति सीको भ्रमणपश्चात चिनियाँ सहयोगका सम्बन्धमा हाल चुलिंँदै गरेको चर्चामा पनि पुनरावृत्त छ ।
द्विपक्षीय सहयोगको सन्दर्भमा नेपालद्वारा चीनको हितमा निभाइएको भूमिकाबारे चर्चा गरिँंदैन भने त्यो नितान्त एकाङ्गी हुनेछ । होला, नेपालले पुर्‍याएको सहयोग चिनियाँ सरकारको जस्तै भौतिक वा आर्थिक इकाइमा गिन्ती गर्न सकिन्न । तर ती सहयोग चिनियाँ राष्ट्रिय सुरक्षा तथा हितका दृष्टिकोणले कत्तिको महत्त्वपूर्ण रह्यो भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हो । चीनको सार्वभौमिक अखण्डता कायम राख्न नेपालले निर्वाह गर्दै आएको संवेदनशील भूमिका द्विपक्षीय सहयोगको सवालमा कसरी मूल्याङ्कन गरिने हो ? चिनियाँ राष्ट्रिय एकताको भावनालाई नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय नीतिको रूपमा अंगिकार गरेको छ, त्यसको नापतौल कसरी गर्ने हो ?
स्मरणीय होस्, सन् १९५१ मा लालसेना तिब्बत प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँको राजनीतिक अस्थिरता अनि १९५९ बाट दलाई लामा भारतमा निर्वासित अवस्थामा बस्दै गर्दा, नवोदित जनवादी गणतन्त्र चीनको अस्थिरता चाहने अमेरिकी सरकारको लागि एउटा राम्रो अवसर जुटेको थियो । अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता अस्वीकार गर्ने विद्रोही खम्पा युवाहरूको एक जमातलाई अमेरिकाको कोलोरायडो लगेर गुरिल्ला रणकौशलको प्रशिक्षण दिएर फिर्ता पठाइएको थियो । तिनीहरूकै नेतृत्वमा नेपालको मुस्ताङ कोरला नाकामा झन्डै एक हजार विद्रोहीले अखडा जमाएर बसेका थिए । यो १९६० सेप्टेम्बरको कुरा थियो । खम्पा विद्रोहीको एकमात्र अभिष्ट भनेको चिनियाँहरूलाई तिब्बतबाट विस्थापित गराएर पुन: दलाई लामालाई शासनसत्तामा पुन:स्थापित गराउनु थियो । चीनको लागि खम्पा विद्रोह ठूलो चुनौती रह्यो, खम्पा विद्रोहका कारण चिनियाँ राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतामाथि संकट आउन सक्थ्यो । तर नेपालले सेना परिचालन गरेर त्यस विद्रोहमाथि पूर्णतया नियन्त्रण गर्‍यो, खम्पा विद्रोहका नाइके वाङदे मारिए । यसरी चिनियाँ राष्ट्रिय सुरक्षाका हितमा द्विपक्षीय आपसी सहयोग अन्तर्गत नेपालले एउटा उदाहरणीय भूमिका खेल्यो ।
उता जवाहरलाल नेहरू नेतृत्वको भारत सरकारमा सरदार वल्लवभाइ पटेलजस्ता व्यक्ति मन्त्रिपरिषदमा थिए, जसले नेपालको उत्तरी हिमाली भूभागसम्म भारतीय सीमा सुरक्षा क्षेत्र ठान्थे । अनि नेपाल–भारत मैत्री तथा शान्ति सम्झौता १९५० लाई आधार मानेर १९५२ जून ९ बाट नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा चेक पोष्ट राख्न लगाइयो । चीनको राष्ट्रिय अखण्डताको लागि एउटा खुल्ला चुनौती थियो, नेपालको उत्तरी सीमामा खडा गरिएका भारतीय सेनाको चेक पोष्ट । आकारले सानै भए पनि नेपालको दरिलो आँटले सन् १९६९ अप्रिल २० मा ती भारतीय चेक पोष्ट हटाउन लगायो । प्रत्यक्षत: त्यो चीनको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि नेपाली पक्षको अर्को महत्त्वपूर्ण सहयोग रह्यो ।
नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा रहेको कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाबाट फाइदा उठाएर वर्षेनि हजारौं तिब्बती शरणार्थीका रूपमा नेपाली भूमिमा अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गर्थे । अन्तत: उनीहरू नेपाली भूमि प्रयोग गर्दै भारतको हिमाञ्चल, धर्मशालामा केन्द्र बनाएर बसेको दलाई लामाकोमा पुग्थे । स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरका लागि यसरी वर्षेनि पलायन भएर आएकाहरू थप जनशक्ति बन्थे । अर्कोतिर चिनियाँ सरकारका लागि यिनीहरू सम्बोधन नै गर्न नसकिने राजनीतिक समस्याका स्रोत हुन्थे । त्यो क्रम वर्षौंसम्म निरन्तर रह्यो । तर केही वर्ष यतादेखि नेपाल सरकारको सुदृढ सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षाका कारण तिब्बतबाट नेपाली भूमि प्रयोग गरेर भारत पुग्ने शरणार्थीहरू संख्या लगभग शून्यमा झरेको छ । अवश्य पनि यसले निर्वासनबाट हुने तिब्बतीहरूको आन्दोलनमा असर पारेको छ ।
विदितै छ, चिनियाँ नेतृत्वका लागि अहिले जल्दोबल्दो चुनौती भनेको ताइवानदेखि सिन्चियाङ अनि हङकङदेखि तिब्बतसम्म उठिरहेका स्वतन्त्रताका आवाज हुन् । विविधता र बहुलता भएको चीनमा जातीय विखण्डन र स्वतन्त्रताका विद्रोही झिल्कोका कारण विशाल चीनको राष्ट्रिय एकता र अखण्डता छताछुल्ल हुनसक्छ । यीमध्ये तिब्बत बढी संवेदनशील मुद्दा हो भन्नेमा चिनियाँ नेतृत्व जानकार छ । तसर्थ यसमा उनीहरू कुनै पनि अर्थमा कसैसंँग सम्झौता गर्न तयार छैनन् ।
नेपालले विशेषत: चिनियाँ सार्वभौमिक अखण्डता, राष्ट्रियता र सुरक्षाको पक्षमा आजसम्म पुर्‍याउँदै आएका जुन सहयोग छन्, त्यसको सही मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । र नेपालले खेलेका यी भूमिकाको उल्लेख नगरिकन द्विपक्षीय सहयोगको चर्चा कुनै पनि अर्थमा पूर्ण हुँदैन । सही अर्थमा नेपालले आजसम्म एक चीन नीतिको मात्र समर्थन गरेको छैन, चीनलाई अनेकतामा विभाजित हुनबाट रोक्न पनि महत्त्वपूर्ण दायित्व पूरा गरेको छ ।
चिनियाँहरू भन्छन्, ‘एउटा प्वाँख उपहार दिनका लागि पनि हजारौं माइलको यात्रा गर, किनभने एक सानो उपहार पनि अभिन्न मित्रताको चिनो बन्छ ।’ मित्रताको यात्रामा नेपालीहरू चीनतिर फर्केर हजारौं वर्ष अगाडिका बुद्धभद्रको समयदेखि, अरनिको, भृकुटी हुँंदै आजसम्म उपहारका लागि प्वाँख लिएर हिँंडिरहेका छन् । विश्वास छ, चिनियाँहरू मित्रताको यो प्रतीकलाई राम्ररी बुझ्छन् ।
प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ ०७:५५